Waxaan ku noqoday Jigjiga bartamihii 2017kii kadib markii aan muddo 50 sanno in ka badan aan qaxootinimo aan uga maqnaa magaaladda Qalaafe oo ka tirsan gobolka Shabeela, waxaana magaalada Jigjiga aan soo joogay muddo dhowr bilood ah oo ahayd xiligii uu ka talinayey Cabdi Maxamed Cumar. Muddadii gaabneeyd ee aan joogay degaanka Soomalida, waxaan u kuur galay nolosha dhabta ah ee dadkaas iyo xaaladooda dhaqan dhaqaale.
Waxaan doonayaa in aan si cad aan halkan uga sheegayaa in dawladii Cabdi Maxamuud Cumar ay qabatay mashaariic horumareed oo isha ay qaban karto oo marag ma doonta ah sida: Waddada Jigjiga-Godey, Jaamicadda Jigjiga, Biyo Xireenka Godey , Isbitaalka Weyn ee loo yaqaano :” Referral Hospita”, kor u qaadida bilicda Jigjiga iyo maalgelinta ay ku sameeysay mashaaricda gaarka u ah ganacsatad deggaanka. Waxayse Soomaalidu tiraahdaa “Qulwale ayaa Quraan isku fuuqsaday” oo aan ula jeedo, in hawlihii mashaariicdaas oo idil ay gacanta ugu jirtay hal xafiis oo lagu magaacbi jiray Xafiiska madaxtooyada oo ay hareeysay maamul xumo iyo karti daro.
Abdiqani Farah Dhalaweyn